#BURMA #MYANMAR #PRESSCONFERENCE #KOH #TAO #CASE #18/12. #YANGON | democracy for burma
#BURMA #MYANMAR #PRESSCONFERENCE #KOH #TAO #CASE #18/12. #YANGON
tags: ဟာပြောမည့်သူမျာ, အချိန်း နံနက် ( ၁၁), ၁၅၊၁၂၊၂၀၁၄, Burma, Htoo Chit, International Migration Day, ko tao case, MURDER CASE, Myanmar, Orchid Hotel, Press conference, Yangon
Date: 18, December 2014, International Migration Day
Time: From 11 Am, to 1 Pm.
Location: Orchid Hotel, No, 91. Bo Hta Htaung Street, Bo Hta Htaung Township, Yangon, Burma.
– နိုင်ငံတကာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ (၁၈၊၁၂၊၂၀၁၄) ရက်နေတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင်( လိပ်ကျွန်း) လူသတ်မှု့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် မြို့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်၊
– အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို မြန်သံရုံးမှ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် အထူးစုံးစမ်းရေးကော်မီတီ မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– မြန်မာ သတင်းမီဒီယာများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နှင့် မြန်မာ၊နိုင်ငံသားအနေဖြင့် လက်ရှိအမှု့ အခြေအနေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြသည့် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက် လာရောက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု့ ကိစ္စသည်၊ အဖမ်ဆီးခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး၏ အရေးကိစ္စ တစ်ခုထဲ မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြ သည့် သန်းပေါင်းများစွာသော ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အရေးကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တကွ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံး အမျိူးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဖက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဦးထူးချစ် ( ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)
ဦးအောင်မျိူးသန့် ( မြန်မာရှေ့နေ၊ ဥပဒေအကြံပေး)
ဦကျော်သောင်း ( စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတာဝန်ခံ)
Orchid Hotel, ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့် ။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အချိန်း နံနက် ( ၁၁) နာရီမှ နေ့လည် ( ၁)နာရီထိ
နေ့ရက်။ (၁၈၊၁၂၊၂၀၁၄)၊ နိုင်ငံတကာ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့။
← #แถลงการณ์ฯ #ฉบับ #12 #ในหลวงพระวรกายแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ #ไม่มีไข้
မှ #လူနာပြန်သောနေ့ (15-12-2014) နေ့ ည( ၈း၀၀) #နာရီ တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ →